Iwo akanganwa zvakanyanya yakavhurwa sosi mapurojekiti (uye zvikonzero) | Linux Vakapindwa muropa
Pamusoro pechinyorwa pane akaipisisa maapplication eLinux, nhasi ndoda kuenderera neimwe runyorwa "dema" neimwe yeiyo akanganwa akawanda akavhurwa sosi mapurojekiti. Chokwadi ndechekuti mamwe ezvinyorwa haana kunyanyoipa, asi ivo vakapedzisira vave sarudzo kune vashoma. Semuenzaniso Kubatana, girafu rakajeka randakazvishandisa ini, asi iro rakaguma riri mutangi rezvirangaridzo, kunyangwe ichiri kugona kuiswa kune avo vachiri kuifarira.
Nekudaro, zvinopfuura zvakashata zvakasvinudzwa mapurojekiti, iwo mapurojekiti izvozvi zvave chaizvo yakatukwa uye inokuvadza kutsigirwa nevamwe vakapedzisira vazvimanikidza ...
1 Iwo akakanganwika akavhurika sosi mapurojekiti
1.3 Ubuntu Kubata uye FirefoxOS
1.6 Samsung DeX
Ipo iyo Unity 3D injini iri kukunda muvhidhiyo mutambo wepasi rose, "hama" kubatana (Canonical's graphical shell yeGNOME) yave kuda kunyangarika muchiito. Kwakave kubudirira kukuru apo Ubuntu yakachiishandisa, vazhinji vashandisi vakaifarira, zvisinei, ikozvino vaichinjira kuGNOME uye vashoma vanoita sevanorishaya.
Imwe yezvishongo zveCanonical zvakaguma zvichitadza kusiririsa, pamwe neUbatana, Ubuntu Kubata, Ubuntu Edge, nezvimwe. Kunyangwe ichiri mukuvandudzika, chokwadi ndechekuti kugamuchirwa kweichi graphic server Hazvina maturo. Mazhinji distros achiri kushandisa X kana Wayland.
Ubuntu Kubata uye FirefoxOS
Canonical yaidawo kusvika nharembozha neayo Ubuntu Bata, uye kunyangwe iri sisitimu inovhura mikana ichienzaniswa neApple, uye ichiri kuvandudzwa neBUBports, chokwadi ndechekuti vashoma vatangisa kuitora. Chinyorwa chavo chemidziyo inoenderana ishoma kwazvo.
Firefox OS Icho chaive chimwe chezvishamiso izvo zvaiita sekunge vaizoenda kure. Mune ino kesi kubva kuMozilla, uye zvakare nechinangwa chekukunda nharembozha. Nekudaro, izvozvi zvinoonekwawo nekusavapo kwayo ...
La Diaspora social network Yakaitirwa kuti ibudirire, nehurongwa hwakagoverwa, nemapoka enzvimbo dzakazvimiririra dzinoshanda pamwechete, uye nepfungwa yekuvandudza zvakavanzika uye kudzivirira kutonga kwemakambani makuru. Zvisinei, iyo pfungwa yakanaka yakashanduka kuita chimera uye vashoma vanoirangarira futi.
Vazhinji vanoziva MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MongoDB nezvimwe, asi ivo chokwadi havazombo rangarira RethinkDB. Yakavhurika sosi dhatabhesi yakagadzirirwa kutyaira chaiwo-nguva mhedzisiro yemhedzisiro. Iyo yaishandisa mutauro weReQL, yakadzamidzirwa uye domain-yakatarwa mutauro weRuby, Python, Java, uye JS. Zvisinei, vadziki vayo vanobvuma kuti kwaive kukundikana.
Ichi chirongwa chaishamisa. DeX yeLinux Samsung yakanangana nekuita kuti zvive nyore kune mushandisi kubatanidza yavo Android nhare mbozha uye kuishandura ikave yakazara-yakazara Linux desktop. Pfungwa yakaita seCanonical yakatsvaga kusangana, uye izvi zvakazopera nenzira yazvakapera. Kunyangwe zvaitaridzika kunge zvinokwezva, mu2019 ivo vangasarudza kurodha chirongwa ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iwo akakanganwika akavhurika sosi mapurojekiti
Pindura kuna Vakakanganwa
Omar Villadeamigo akadaro
FirefoxOS yakava KaiOS iyi inoshandiswa mumafoni anochengeta fomati yekare nekhibhodi yemuviri uye ine maapplication ewebhu senge whasapp faceboock nevamwe.
Iyo yakanaka imwe nzira kune vanhu vakuru.
Pindura kuna Omar Villadeamigo
BLAKE3 yakachengeteka, inokurumidza uye inofananidzwa cryptographic hash basa